Iingcamango zoYilo kwiNdawo yaMandla | Creatives Online
Ukuba unomrhumo we-Ofisi 365 ngoko kunokwenzeka ukuba ubone inkonzo entsha xa ufaka umfanekiso kwisilayidi (ukuba nje uqhagamshelwe kwi-Intanethi). Imalunga ne yila izimvo kwiPower Point, isixhobo ekungaziwa kangako ngaso. Kodwa inokuba nomdla kakhulu.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi iingcamango zoyilo kwi-Power Point, indlela yokuyivuselela kunye nento onokuyenza ngayo, ngoko siya kutyhila yonke into kuwe.
1 Ziziphi iingcamango zoyilo kwi-Power Point
2 Kutheni Usebenzisa Iimbono zoYilo kwiPoyinti yaMandla
3 Uzivula njani izimvo zoyilo
3.1 Amanyathelo okuVumela iMibono yoYilo
3.1.1 Vula inkqubo yePowerPoint
3.1.2 Vula umboniso ongenanto
3.1.3 Ukhetho "Uyilo"
4 Khubaza iimbono zoyilo
5 Iindlela ezizezinye kumyili wengcamango
Ziziphi iingcamango zoyilo kwi-Power Point
Iingcamango zoyilo, ekwabizwa ngokuba ziiNgcebiso zoYilo, okanye uMyili wePowerPoint, ziluncedo ngokwenene inikwe yinkqubo ukwenza isilayidi sibonakale sinomtsalane kangangoko.
Kule nto, xa ulayisha umbhalo, imifanekiso, njl. kwisilayidi, kwaye uvule isixhobo, sinokukunika iinketho ezininzi zokuphinda ulungelelanise umxholo kwaye wenze eso seti sikhangeleke ngcono ngokubonakalayo, sibe nomtsalane ngakumbi ukuze senze impembelelo.
Abaninzi bacinga ukuba, njengesixhobo, i-designs inokuthi ihambelane phakathi kwabantu ababini okanye ngaphezulu, kodwa kuthiwa akwenzeki, ekubeni iziphakamiso ezicetywayo zingenangqondo kwaye kukho ithuba elincinci lokuhambelana. Kwaye kutheni kusenziwa oku?
Yiba nomfanekiso wesilayidi sePowerPoint. Ngokuqhelekileyo, usebenzisa enye yeetemplates. Kodwa, njengawe, abantu abaninzi bayayenza, kwaye ekugqibeleni ukuba ubuchule kunye nemvelaphi ilahlekile ukususela, xa kuziwa ekuboniseni, kuya kufana phantse kubo bonke. Kule meko, iimbono zoyilo kwi-Power Point zifuna ukusungula kunye nokufezekisa umphumo owahluke ngokupheleleyo.
Kutheni Usebenzisa Iimbono zoYilo kwiPoyinti yaMandla
Ukuba ukusetyenziswa kwesi sixhobo akukacaci kuwe, enye yezona zinto zibalulekileyo kubuchule obunayo, oko kukuthi, ukuba nokwenzeka koyilo olulodwa. Kwakhona, akufuneki ucinge malunga nolo yilo, okanye ukhethe itemplate yokufaka idatha. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukumnika le nto ufuna ukuba isilayidi siyiphathe kwaye uya kukucebisa ngeembono ukuba ukhethe lowo ukhetha. Kwaye nokuba ufuna ukuhlela enye into kamva, unga.
Ngamafutshane, sithetha ngesixhobo soyilo ikunceda ubonise ulwazi ngeendlela ezahlukeneyo kwaye ikuvumela ukuba ungabi naxhala malunga nokukhetha ubeko, itemplate, ukuyila, njl. Inkqubo ithathela ingqalelo yonke loo nto.
Uzivula njani izimvo zoyilo
Ukuba unePowerPoint kwaye ufuna ukwenza kusebenze izimvo zoyilo kwinkqubo, okokuqala kufuneka wazi ukuba uyahlangabezana neemfuno zokwenza njalo. Ngokukodwa, ezi zezi:
Yiba nenkqubo yezomthetho yeOfisi 365, oko kukuthi, ayiqhekezwanga.
Yiba nomrhumo wocwangciso. Ingasetyenziswa ngaphandle kokubhalisa, kodwa kule nto ufuna i-OneDrive okanye i-SharePoint (i-akhawunti esebenzayo kunye ne-intanethi).
Amanyathelo okuVumela iMibono yoYilo
Ukuba uthobela oku kungasentla akufanele ube nangxaki yokuvula izimvo zoyilo. Kule meko kufuneka wenze oku kulandelayo:
Vula inkqubo yePowerPoint
Oku kusengqiqweni kwaye yinto yokuqala ekufuneka uyenzile. Yiya kwikhompyuter yakho, fumana inkqubo kwaye uyivule.
Vula umboniso ongenanto
Into elandelayo, xa sele unenkqubo esebenzayo, kukubetha iPresentation ingenanto, ukusebenza "ukusuka ekuqaleni."
Ngoku unesilayidi esingenanto kwisikrini apho unokongeza isihloko kunye nesihlokwana (siphuma ngolu hlobo ngokungagqibekanga). Ewe, phambi kokuba wenze nantoni na, kufuneka uye kwimenyu yoYilo. Ungoyiki ukuba, okokuqala uyisebenzisa, ikucela iimvume zokufumana izimvo, cofa Vuselela, kwaye iya kuba ilungile.
Oku kuyakwenza Ikholamu ivula ngasekunene eya kubeka iMibono yoYilo. Kwaye apho ungakhetha itemplate okanye umbono owuthanda kakhulu.
Ukuba ndifuna enye into?
Kungenzeka ukuba awusifuni isilayidi esinombhalo kuphela kunye nesihloko, kodwa ngefoto, ngombhalo, njl. Njengokuba. Unokongeza olo lwazi ngaphandle kwengxaki, kwaye ubuyele kwiingcamango zokuyila ukukubonisa iindlela ezahlukeneyo zokuhlanganisa itemplate yakho.
Khubaza iimbono zoyilo
Kusenokuba imeko yokuba awuzithandi izimvo zoyilo, okanye ukhetha ukwenza yonke into ngokwakho. Ukuba ufuna ukuthintela ukuba zingaphumi ngokuqhubekayo, kungcono ukuba zingasebenzi.
Ukwenza oku, kufuneka uye ku Imenyu yefayile kwaye apho ujonge "Ukhetho".
Kuloo menyu, fumana leyo ithi "Ukhetho lwePowerPoint." Kufuneka ucofe ku-"General" kwaye, phantse ekupheleni, uya kuba nebhokisi evuliwe ethi "Ndibonise ngokuzenzekelayo iingcamango zoyilo." Kuya kufuneka uyicime loo bhokisi kwaye awusayi kuba nayo.
Iindlela ezizezinye kumyili wengcamango
Inyaniso yokuba iingcamango zoyilo zisebenza kuphela kubabhalisi kwiprogram kuthetha ukuba abaninzi abafuni ukuyisebenzisa, okanye abanako, kwaye oko kuthetha ukuba abanalo ukhetho. Nangona kunjalo, akukho nto eyenzekayo ngokwenene kuba unako qhubeka nokusebenzisa itemplates zePowerPoint eziqhelekileyo esinazo ngokwendalo.
Okanye banokuba njalo Khangela i-intanethi ngeetemplates zePowerPoint zasimahla, ukuba zikhona kwaye ngamanye amaxesha zintle nje ngezo esi sixhobo sisinika zona.
Kuyinyani ukuba apha wenza umngcipheko wokuba abanye basebenzise itemplates ezifanayo, kodwa ukuba ukhangela kakuhle kunokwenzeka ukuba uya kufumana ezinye iinketho ezingasetyenziswa kakhulu kwaye ziya kukwenza ukuba udale uyilo olwahlukileyo. Okanye banokusebenza njengesiseko sokuziguqula (ukuba ziyayivumela) kwaye ufumane itemplate yakho.
Ndiyathetha ukuba unomrhumo, ungasebenzisa imibono yoyilo kwi-Power Point ukwenza izilayidi zakho ngaphandle kokuchitha ixesha kwaye ukhethe ukuyila kunye noyilo olutsala amehlo. Kodwa ukuba awunayo, akukho nto yenzekayo; Kuyinyani ukuba kuya kufuneka unikezele kancinci ngakumbi ukuze ufumane itemplate elungileyo okanye uyilo olugqibeleleyo, kodwa umphumo unokuba ngumtsalane. Ngoku sixelele, ukhe wazama isixhobo? Kuthini nge? Ngaba kufanelekile umrhumo ukuze ukwazi ukuwuvula?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Yila izimvo kwiPower Point